UMbuso uDuma uthole umthethosivivinywa ohlose ukwenza ngcono ukulawulwa kombuso emkhakheni wokuphathwa ngokuphepha kwezibulala-zinambuzane nemithi yezolimo.
Izichibiyelo zakha izidingo eziyimpoqo kule ndawo, futhi ziphinde zilawule ukuqaliswa kokulawulwa kombuso emkhakheni wokuphathwa okuphephile kwezibulala-zinambuzane nama-agrochemicals, kufaka phakathi ezindaweni zokuhlola ezingaphesheya komngcele weRussia Federation.
Uma lo mthethosivivinywa wamukelwa, uhulumeni uzonikezwa amandla okugunyaza Umthethonqubo Wokulawulwa Kombuso mayelana Nokuphathwa Ngokuphephile Kwezibulala-zinambuzane Nemithi Yezolimo. Lo mbhalo uzokhipha umkhawulo wamandla ezinhlangano ezilawula nokuphatha zombuso. Ngaphambilini, ukuphathwa kule ndawo kwakwenziwa yiRosselkhoznadzor. Kodwa-ke, ngo-Agasti 2011, izichibiyelo zaqala ukusebenza "ezinganikezi amandla kaRosselkhoznadzor nezinye iziphathimandla zokuphatha zikahulumeni kule ndawo," kuchaza abalobi bezichibiyelo.
Iphrojekthi ehlongozwayo nguhulumeni isungula ukuthi "izidingo eziyimpoqo zokuphepha kwezibulala-zinambuzane kanye nemithi yezolimo, izinqubo zokusetshenziswa kwazo, imithetho kanye namafomu okuhlola ukuhambisana kwazo nalezi zidingo eziyimpoqo kusungulwa ngezivumelwano zomhlaba wonke zeRussia Federation, umthetho we-Eurasian Economic Union kanye nomthetho weRussian Federation emkhakheni wezomthetho wobuchwepheshe, ukuvikelwa kwemvelo kanye inhlanzeko yenhlalakahle yabantu '.
Umthethonqubo uzobeka nokuthi ukulawulwa kwenziwa ngesikhathi kwenziwa ama-pesticides kanye nama-agrochemicals eRussia Federation, ukungeniswa kwawo ezweni, ukugcinwa, ukuthengiswa, ukusetshenziswa, ukungathathi hlangothi nokulahlwa. Ngasikhathi sinye, kuzokwazi ukungenisa lezi zinto eRussia kuphela ngezindawo ezikhethekile zokuhlola, ezizosungulwa yiKhabhinethi.
Ukwamukelwa komthethosivivinywa kuzoqinisekisa ukuhambisana nemithetho yokusetshenziswa kwezibulala-zinambuzane nemithi yezolimo, kususe umthelela omubi empilweni yabantu nasemvelweni lapho kusetshenziswa ezolimo, kuphetha abalobi bezichibiyelo.
Tags: ukulawula ukuphathwa kwezibulala-zinambuzaneRosselkhoznadzor
Ngo-2020, abakwa-Vladimir agrarians bathumela ngaphandle kwamathani ayizinkulungwane ezingama-4,7 emikhiqizo yezitshalo